GQ နှင့် ROBERT PATTINSON တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သောကားတိုက်မှုအားလုံး၏အကောင်းဆုံးအပိုင်း - သတင်း
အားလုံးသောအချိန်ကာလ၏အကောင်းဆုံးသောပရိုဖိုင်ဖြစ်ခြင်းအဆုံးသတ်သွားသောအခါ GQ အတွက် ၀ န်ထမ်းစာရေးဆရာ Zach Baron သည် Robert Pattinson ကိုသူလန်ဒန်တွင်ရှိစဉ်အတွင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရောဘတ်ပက်တင်ဆန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်စုံတစ်ရာကိုလိုက်နာပါကသို့မဟုတ်ယခင်ရောဘတ်ပါတီဆန်၏အင်တာဗျူးများကိုဖတ်ရှုခဲ့ပါကသူသည်ပြည်နယ်မှချမှတ်ထားသောမိမိကိုယ်ကိုအထီးကျန်လများနှင့်အတော်လေးသင့်တော်မည်ဟုခန့်မှန်းခြင်းကိုသင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ GQ ဆောင်းပါးသည်၎င်းကိုသာအတည်ပြုသည်။ ဤပရိုဖိုင်းကို Zoom အင်တာဗျူးများမှကောက်နုတ်ချက်များ၊ R Patz ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများနှင့်အလွန်ထူးဆန်းသောခေါက်ဆွဲများကိုတိုက်ရိုက်ချက်ပြုတ်သောသရုပ်ပြပုံများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Robert Pattinson သည်အစာရှောင်အစားအစာခေါက်ဆွဲစီးပွားရေးကိုတည်ထောင်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာ Robert Pattinson လုပ်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုအလိုအလျောက်ထုတ်ပေးတဲ့ bot တစ်ခုကထွက်လာတာနဲ့တူတဲ့အဲဒီစာကြောင်းသုံးခုကငါသိတယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည်အတိုင်း, ရောဘတ်ပက်တင်ဆန်ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာဗျူးများအတွက်တော်တော်ရိုင်းချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်။ သူကလုံးလုံးလျားလျားဂရုမစိုက်သလိုပဲသူတကယ်ပုံရသည်, ဒါပေမယ့်သူကသူ့ကိုကြီးမားတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုလိုမျိုးဒီခံစားချက်ကိုသင်အနည်းငယ်ရပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်သည်။ သူသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တွင်ခေါက်ဆွဲများကိုချက်ပြုတ်ပြီးမီးထဲထည့်လိုက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးဆန်းသောကျော်ကြားမှု၏ဆွဲကြိုးများကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ သင်မပြောနိူင်ပါက - ခေါက်ဆွဲဆက်သည်အပိုင်းအစ၏တကယ့်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မာရ်နတ်သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များတွင်တည်ရှိပြီးအင်တာဗျူးကိုရှည်လျားစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ရောဘတ်ပက်တင်ဆန်ကိုစတင်နားလည်လာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုခံစားမိသည်။ ယခုမှာသင်သည်လည်းလုပ်နိုင်! (သူဖတ်ရှုမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ အကယ်၍ သူဖတ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ဝါကျသည်သူ၏အဆိုးဆုံးအိပ်မက်ဆိုးဖြစ်သည်။
သူက GQ ကောင်လေးကိုဖုန်းခေါ်ရန်သူ့ကိုသတိပေးရန်လူသုံးယောက်လိုအပ်ခဲ့သည်
နိဒါန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောဘတ်ပက်တင်ဆန်၏အဆုံးတွင်အရာများ၏ပုံသဏ္seeာန်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ သူဟာလန်ဒန်မှာရှိနေပြီး Batman ထုတ်လုပ်သူများကသူ့ကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ Batman ထုတ်လုပ်သူများကအစားအစာအစီအစဉ်များကိုကျွေးမွေးသည်။ သူမရည်းစား၏ကုမ္ပဏီသာရှိသည်။ (?????? ဒါဟာငါတို့နောက်ဆုံးကြားသိရတာကမှငါ့ကိုအံ့သြစရာကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ FKA Twigs ဖြစ်ပေမယ့်အဆင်ပြေပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ အေးပါတယ်။ လုံးဝကောင်းပါတယ်။ ငါ့ကိုမထိပါနဲ့။ )
၎င်းသည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသည်ဟုထင်ရသော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်သူသည်လူ ၃ ဦး ကိုခေါ်။ GQ စာရေးသူအားသူနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုခေါ်ရန်သတိပေးခဲ့သည်။ သူ၏အင်တာနက်သည်အလွန်ညံ့ဖျင်းသည်။ သူ့မှာဖုန်းနှစ်လုံးနဲ့လက်တော့တစ်လုံးရှိတယ်၊ သူတို့ထဲမှတစ်ယောက်သာဝန်ဆောင်မှုရနေသည်။ သူ Batman အခန်းကဏ္ for များအတွက်ထွက်အလုပ်လုပ်ခံရဖို့ထင်ရဲ့ဒါပေမယ့်သူကမဟုတ်ပါဘူး။
ရောဘတ်ပက်တင်ဆန်သည် Batman ၏ကိုယ်ခန္ဓာအသွင်အပြင်ကိုလိုက်နာရန်ငြင်းဆန်ခြင်းကသူသည်ကြီးမားသောမြည်းအတုရှိသည့် Batman ရုပ်ရှင်အကြောင်းကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်ကိုပိုမိုနီးကပ်စေသည်။
- pixelatedboat ခေါ် mr tweets (@pixelatedboat) မေလ ၁၃ ရက်၊
ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည် Robert Pattinson အင်တာဗျူးနှင့် uhhhhh တွင်ပထမဆုံးဓါတ်ပုံအနည်းငယ်ကိုတွေ့ရသည်
အမှားအယွင်းဖြစ်နိုင်သည့်အရာကို quarantine မှ robert pattinson အားမိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ဖက်ရှင်စတိုင်ဖြင့်ဘာကြောင့်မလုပ်သင့်သည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ pic.twitter.com/7vZGcfYZaC
- စာရာ Dollard (@snazdoll) မေလ 12, 2020
Robert Pattinson, quarantine စဉ်အတွင်းမိမိကိုမိမိဓာတ်ပုံရိုက်, ငါ့စိတ်ကတခါတရံငါ့ကိုအံ့သြသွားတယ် pic.twitter.com/NFTsj9Zm8t
- ကွန်ယက် (@pattinsonbats) မေလ 12, 2020
ဒီ Robert Pattinson ရဲ့အင်တာဗျူးရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်းတစ်ခုကတော့သူဝတ်ထားတာကိုမှတ်စုတွေဖြစ်တဲ့ Scarf (ခေါင်းပေါ်မှာ ၀ တ်ဆင်ထားသူ) ဒေါ်လာ ၂၇၀ နဲ့ Flip flops (သူ့ကိုယ်ပိုင်) တွေပါပါတယ်။
R Patz သည်သူကစားသည့်ဇာတ်ကောင်များ၏ဆံပင်အရောင်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်းထန်သောခံစားချက်ရှိသည်။ ပကတိဆံပင်အရောင်မဟုတ်ဘဲသူတို့ရရှိထားသည့် Vibe နှင့်၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆံပင်အရောင်နှင့်မည်သို့မည်ပုံဆက်စပ်နေသည်။ တင်းကြပ်စွာမျှဆံပင်ရွှေရောင်ယောက်ျားခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ အင်တာဗျူးတွင်သူကပက်တင်ဆန်ကသူသည်အခြားယောက်ျားလေးဖြစ်လိုသောအခါဆံပင်ရွှေရောင်ကောင်လေးအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုများရနေသည်ဟုတွက်ဆခဲ့သည် - ‘ငါဟာအခြေခံအားဖြင့်ဂျပိန်ယောက်ျားလေးတွေကိုလိုချင်တဲ့အခန်းကဏ္wantedကိုအမြဲလိုချင်ခဲ့တယ် အနက်ရောင် ဆံပင်။ ' ထို့နောက်သူသည်စာရေးသူ၏အတိတ်ကအခန်းကဏ္ s များကိုအလွန်သင့်လျော်စွာဖော်ပြထားသည်။ သူသည်အပြစ်မဲ့သူများ၊ သောင်းကျန်းသူများ၊ အပြင်လူများ၊ ဒီမှာ GQ ကနေတရားမျှတတဲ့ကစားအလွန်တိကျသောပါပဲ။
သူကမင်းကို 'အပြင်ကထွက်ခွင့်မပြု' လို့ဖမ်းဆီးခံရမှာကိုကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်
R Patz က GQ ကိုပြောတယ်။ ငါအဖမ်းခံရမှာကိုကြောက်တယ်။ သင်ဒီမှာန်းကျင် run ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါခံစားလိုက်ရတဲ့ကြောက်စိတ်ကတော့အတော်လေးကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။ သူဟာလန်ဒန်မှာရှိတယ်ဆိုတာသိသလား။ သင်ဘယ်ပြေးနိုင်လဲ တရားဝင်လား? တစ်ယောက်ယောက်ကဒီဆင်းရဲသားကိုဆက်သွယ်ပြီးသူ့ကိုပြောပြပါ။
ဒါကြောင့်သူကသူ Batman မုန့်ညက်အစီအစဉ်ကိုဖွင့်ကြောင်းဖော်ပြထားပေမယ့်သူကစားသောအစားအစာများသို့ဝင်: လိုပဲငါဘူးခွံများနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယထဲကစားပါ။ ငါစာသား Tabasco တူနာငါးဘူးထဲမှာထည့်ရုံလုပ်နိုင်တဲ့ထဲကစားပါလိမ့်မယ်။ ငါ ... ဒါဟာလိုက်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါ့အကြိုက်များ ... ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့စားရုံမျိုး။ လိုပဲ, အမှိုက်ပုံးထဲက။ သူ့ကိုချစ်တယ်။
Robert Pattinson သည်စာသားတစ်ခုအရရူးသွပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည် pic.twitter.com/m3TZdWf6bc
- ကဲန် (@mulhlndrve) မေလ 12, 2020
ဒီမှာဖရိုဖရဲစွမ်းအင်။ အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ - ယနေ့သူသည် Carhartt အနက်ရောင် ဦး ထုပ်နှင့်အဖြူရောင်တီရှပ်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီး Coca-Cola ၏ဆွဲကြိုးများကိုနီကိုရတ်သွားဖုံးတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေသည်။ သင်၏ MCM နှင့် Robert Pattinson တို့၏ကွာခြားချက်မှာနှစ်သန်းရာဂဏန်းမျှသာရှိသည်။
သူသည်ယခင်ရောဘတ်ပက်တာဆန်အင်တာဗျူးများကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိစေသည့်အင်တာဗျူးများမတိုင်မီကော်ဖီ '၅၀၀၀' ခွက်ကိုသောက်သည်
တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအရပက်တာဆန်ကသူသည်ဤကဲ့သို့သောတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းမတိုင်မီကော်ဖီခွက် ၅၀၀၀ သောက်ခဲ့သည်၊ ဤသို့ပြုသည်၊ ထို့နောက်ပြိုကျပြီးနောက် ၂ ရက်အိပ်သည်။ ဤသူသည်ဂူထဲ၌နေလိုသည်ကိုအမှန်ပင်ဆန္ဒရှိသည်။
R ကို Patz GQ သို့ပြောသည်: ငါကရယ်စရာဟုထင်ထင်သောအလိုဆန္ဒများသောအရာ '' အကြောင်းမရှိပြောနေကြိုက်တယ်။ Ahhhhh သည် Twilight သတင်းစာခရီးစဉ်အတွင်းသူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာဗျူးများအားလုံးကိုရှင်းလင်းပြသခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့အနားယူနိုင်ပါတယ်။
သူကကြောက်ရွံ့ခြင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားမှု '' စပ် 'ကိုခေါ်သည့်အခါ
သူက Batman မှာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဒဏ္characterာရီဇာတ်ကောင်တွေကစားတာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအကြောင်းပြောနေတာနဲ့သူက GQ ကိုပြောလိုက်တယ်။ ထို့နောက်သူကရယ်မောပြီးသူ၏ဖုန်းသေသွားသောကြောင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကိုအတိုဖြတ်လိုက်သည်။ သင်အမှန်တကယ်ဒီ shit မရေးနိုင်ပါ။
- ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ပျောက်ဆုံးသွားသော (@LostInFilm) မေလ 12, 2020
ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့, အထွတ်အထိပ်။ ဒါကစတင်ပုံဖြစ်သည်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ Zach Baron ကဤသို့ရေးသည် - ငါပြောချင်တာကဒီဟာကအနုပညာအပိုင်းအစတစ်ခုလား၊ တကယ်တော့စိတ်ရင်းမှန်လားဟုတ်မဟုတ်ငါအမှန်အကန်ပြောရရင်ငါလုံးဝမသိဘူး။ ငါက၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြပြီးက၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမှန်ကန်မဖြစ်နိုင်ပါထင်ပါတယ်။ R Patz ကိုအတိုချုပ်ဖော်ပြရန်ဝါကျတစ်ကြောင်းတည်းသာလိုအပ်လျှင်၎င်းသည်ဤအရာပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆောင်းပါးသည်တကယ်ကောင်းလာတော့မည့်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
GQ ကပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူ၌စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ရှိခဲ့သည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။ သူကမိမိကိုယ်ကိုဤသို့ပြောလျှင် - 'ခေါက်ဆွဲများသည်ဘာဂါနှင့်ပီဇာကဲ့သို့အစာရှောင်အစားအစာအထောက်အထားများအမှန်တကယ်ရှိပါသလား။ ငါစျေးကွက်၏ဤinရိယာ၌အမြတ်ထုတ်ရန်ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေ, ငါစဉ်းစားရန်ကြိုးစားနေခဲ့သည်: မင်းလက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲတွေကိုမင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးလုပ်ရတာလဲ။ '
သူကသူဟာ panini စာနယ်ဇင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံကိုတီထွင်ဖို့အထိလုပ်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့သူကထပ်ပြီးသွားခဲ့တယ်။ သူက Los Angeles စားသောက်ဆိုင်မူပိုင် Lele Massimini နဲ့ Sugarfish တည်ထောင်သူနှင့်တွေ့ဆုံမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Santa Monica ခေါက်ဆွဲစားသောက်ဆိုင် Uovo ။ ပက်တင်ဆန်က 'ထိုအခါငါငါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုပြောသည်,' နှင့်သူ၏မျက်နှာစကားရပ်ပင်နောက်မှမပြောင်းခဲ့ပါဘူး ကျွန်တော့်အစီအစဉ်ကဘာလဲဆိုတာအသိအမှတ်ပြုပါ။ စာသားသူ့ထံမှဘာမှနိမိတ်လက္ခဏာလုံးဝရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါ့ကိုနည်းနည်းပယ်ရှား။ '' (Massimini ကပြောပါတယ်: ဒါဟာသူပြောခဲ့သည်အရာအားလုံး 100% စစ်မှန်တဲ့ရဲ့)
ဖရိုဖရဲအတွက်နောက်ထပ်စကားလုံးရှိမယ်လို့ငါဆုတောင်းတယ်။ ငါတကယ်ရှိလိုရှိ၏ ဂူဂဲလ်၏အလိုအလျောက်ပြောသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည်ယခုအချိန်တွင်မည်သည့်တရားမျှတမှုမှမပြုလုပ်ပါ
သင်ကသူကအခြေခံအားဖြင့်အတူတူပါပဲင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအစားမုန့်အစား cornflakes ဝယ်ယူကြောင်းကြေငြာသောအခါသူကဆိုးဆိုးရွားရွားသွားမယ့်ကိုငါသိ၏။ ထို့အပြင်သူသည်ကြိုတင်ချထားသောဒိန်ခဲ ၉ လုံးနှင့်ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်ပစ္စည်းသစ်တစ်မျိုးကိုလည်းဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဤသည်မှာအရူးတစ်ယောက်၏ဈေးဝယ်စာရင်းဖြစ်သည်။
သူကစေးလက်အိတ်တွေတပ်ထားတယ်။ အာ Ahhhhh ဒါအရမ်းကောင်းလိမ့်မယ်
Robert Pattinson ၏တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု၏နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအပိုင်းတစ်ခုမှာသူသည်မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်တွင် Penne ချက်ပြုတ်ရန်ကြိုးစားသည့်နေရာဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ယခင်ခေါက်ဆွဲခြောက်နှင့်အနည်းငယ်ခမ်းနားထည်ဝါစွာပြုလုပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာဗျူးသူကသူက gnocchi လား၊ မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတယ်။ သူကရှုပ်ထွေးနေသလို၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အပေါ်ဆံပင်တွေကျနေတယ်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ရောဘတ်ပက်တင်ဆန်ဟာခေါက်ဆွဲတွေအကြောင်းပြောနေတာသေချာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါက်ဆွဲသိုက်များအကြောင်းမသိသောကြောင့်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည် pappardelle, tagliatelle သို့မဟုတ် vermicelli တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ပြီးတော့မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ထဲမှာခေါက်ဆွဲတွေကိုချက်ပြုတ်နိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့သူရော့ကဘယ်လိုသိမှာလဲ။ သငျသညျဤဖတ်နေလျှင်ရော့, ငါ - ငါခေါက်ဆွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မိတ်ဖက်ဖြစ်၏။ ဒါဟာငါပဲ ကျွန်တော်ကူညီနိုင်ပါတယ် ဖုန်းဆက်ပါ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ထဲမှာတစ်ပြားနှင့်ရေရှစ်မိနစ်အဘို့။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူကသတ္တုပါးကိုယူပြီးသကြားကိုသကြားစလေတော့သည်။ '' စမ်းသပ်မှုတွေအများကြီးအပြီးမှာမင်းဟာအရာအားလုံးကိုသကြားနဲ့ဒိန်ခဲအမြောက်အများကိုသိုလှောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာငါတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်သကြားပြီးနောက်သူဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဒိန်ခဲအထုပ်ကိုဖွင့်ပြီးသကြား - သတ္တုပါးထဲကိုအချပ်လိုက်ပြီးစချလာတယ်။ ထို့နောက်ပိုမိုသကြား: 'ဒါဟာတကယ်ကိုသကြားအပေါ်ယံလွှာလိုအပ်ပါတယ်။ '
ထို့နောက်သူကသူသည်ပေါင်မုန့်အဖြစ်တည်ရှိမည့်ပြင်ပအလွှာကိုမေ့သွားသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ သို့သော်ယနေ့ခေတ်တွင်ကွဲသွားသည့် cornflakes ဖြစ်သဖြင့်ဒိန်ခဲနှင့်သကြားများပုံကိုမြှောက်ပြီးသကြား - ဒိန်ခဲကိုပြန်မထည့်မီအလူမီနီယံသတ္တုပါးသို့ပြောင်းဖူးအချို့ကိုကျိုးပဲ့စေသည်။ ကထိပ်ပေါ်မှာ။ ထို့နောက်သူကအနီရောင်ဖြစ်သောငံပြာရည်ကထပ်ပြောသည်။ မိုက်ကရိုဝေ့ (ဖ်) မီးဖိုသည်ပက်တင်ဆန်သည်ခေါက်ဆွဲခွက်ပေါ်တွင်ချက်ချင်းမီးရှို့လိုက်သည်။ သူကကြည့်ပြီးအကြီးအကျယ်ညည်းတွားနေတယ်။ '' သူကချက်ပြုတ်သို့မဟုတ်မပါလျှင်အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူး။ 'သူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွက်ခေါက်ဆွဲစွန့်ပစ်။ ဤအချိန်တွင်သူ၏ ၀ ိညာဉ်များသည်အလံလွှင့်ထူလာသည်။ '' ငါဆိုလိုတာကဒီအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်အဘယ်သူမျှမအခွင့်အလမ်းလုံးဝရှိပါတယ်။ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။
- Cassidy Olsen (@olsencassidy) မေလ 12, 2020
ဒါဟာအနုပညာဖျော်ဖြေမှုနဲ့တကယ့်ဘ ၀ ရဲ့ခြားနားချက်ကိုပြောပြဖို့တကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ GQ ကဤသို့ရေးသားခဲ့သည် - ဤအချိန်တွင်သူသည်မိမိလက်ဖဝါးပေါ်သို့ချက်ချင်းအရည်ပျော်နေသောသူ၏စေးလက်တစ်ချောင်းကိုမတော်တဆလောင်ကျွမ်းစေသည်။ သူကနာကျင်ကိုက်ခဲတယ်
မိုက်ကရိုဝေ့ (ဗ်) မီးဖိုတစ်ခုဟုသူထင်သောအခါသူကမီးထည့်သည်
Pattinson နှင့်အင်တာဗျူးသူသည်သူ၏တိုက်ခန်းရှိ 'မီးဖို' သည်အမှန်တကယ်မီးဖိုလားသို့မဟုတ်မိုက်ကရိုဝေ့လားရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိသည်။ သူကအင်တာဗျူးကိုမီးဖိုတစ်ခုအနေနဲ့အာမခံထားတယ်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူကအယုံအကြည်မရှိဘူး။ သူကလူမီနီယံသတ္တုပါးကိုထည့်လိုက်တယ်၊ အဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်။ သူ့နောက်မှာမီးဖို / မိုက်ကရိုဝေ့မီးဖိုထဲကလျှပ်စစ်မီးထွက်လာတယ်။ ပက်တင်စင်ကအပြင်မှာတစ်ယောက်ယောက်ကမီးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဖုန်းကိုဖွင့်ထားတဲ့ကောင်တာဆီပြန်သွားနေတယ်။ မီးဖိုအလင်းနှင့်အသံ၏သွေတောက်ပသောချွတ်ချပစ်သကဲ့သို့သူ giggling နှင့်ကောက်ဖြစ်ပါတယ်။
သူကကြမ်းပြင်ပေါ်မှာရှိနေတုန်းပဲ၊ ထို့နောက်ပြင်းထန်သောနောက်ဆုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မီးဖို / မိုက်ခရိုဝေ့မှောင်မိုက်သွားသည်။
တိတ်ဆိတ်စွာပက်တင်ဆန်နှင့်ကျွန်ုပ်နှစ် ဦး စလုံးသည်သူ့နောက်ကွယ်နံရံတွင်တည်ဆောက်ထားသောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောစက်ယန္တရားကိုကြည့်နေကြသည်။ '' အင်း၊ ငါဒါကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ရမယ်လို့ထင်တယ် '' ဟုသူကထပ်မံညည်းတွားကာကြမ်းပြင်ပေါ်မှမိမိကိုယ်ကိုကောက်နေသည်။
အတော်လေးတူသောအင်တာဗျူးရှိခဲ့သည်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ အဲဒီမှာရောဘတ်ပက်တင်ဆန်အင်တာဗျူးတောင်မှအတော်လေးမကြိုက်ကြဘူး, သူတို့ကများသောအားဖြင့်သူတို့ကများသောအားဖြင့်တော်တော်လေး Off-base နှင့် zany ပါပဲ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကငါတို့ထက်ပိုပြီးအရူးလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသာသက်သေပြနိုင်ဖို့ဆိုရင်၊ ပိတ်ထားမှု ၇ ရက် - ရှစ်ပတ်မှာငါတို့အားလုံးလိုအပ်တာအတိအကျပါ။ ထိုလူသည်ရောဘတ်ပက်တင်ဆန်ဖြစ်သည်။
အပြည့်အဝ, စံနမူနာအပိုင်းကိုဖတ်ရှုဖို့, ဦး ခေါင်း GQ ။
ရောဘတ်ပတ်တင်ဆန်သည် Twilight ကိုမည်မျှမုန်းကြောင်းပြောဆိုသောငန်သောအရာတိုင်းသည်
• ဉာဏ်စမ်းပဟေ:ိ - Twilight Saga၊ မိုက်မဲခြင်းသင်အမှန်တကယ်ဘယ်လောက်အထိမှတ်မိတာလဲ။
• Twilight သည်အချိန်ကုန်ဆုံးသောစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေဆုံးသောရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းကြောင့်သင်ခေါင်းနာနေရသည်